हाम्रा राष्ट्रपति पनि यस्तै भए..
रुसमा विश्वकप फुटबल हुादै थियो, क्रोयसियाकी राष्ट्रपति कोलिन्दा ग्राबर मैदानमै पुगेर खेलाडीलाई आगालोमात्र हालिनन्, हौस्याँइन् । अनुशासित खेल खेल्न आाट र समर्थन दिइन् । अहा, त्यो दृश्यले विश्वलाई तान्यो, त्यो घटना विश्व समाचार बन्यो । सबैले राष्ट्रपति कोलिन्दाको प्रशंसा गरे ।
नेपालमा पनि महिला राष्ट्रपति छिन् । हाम्रो राष्ट्रपतिले खेलजगत अथवा कुनै पनि राष्ट्रिय महत्वका घटनामा त्यसरी प्रशंसा गरेको, हौस्याएको, नैतिक समर्थन गरेको घटना छैन । यहाासम्म कि भूकम्प गयो, रानीपोखरीको पुननिर्माणको सुरुआत गर्न गएकी हाम्री राष्ट्रपतिले किन ३ वर्षमा पनि रानीपोखरी बनेन भनेर सोधखोज गरेको समाचार समेत आएन । त्यसपछि बाढी पहिरो आयो, अहिले मधेश डुबेको छ, राष्ट्रपति गएर ती पीडितलाई आश्वासन दिने, सक्दो राहत दिने र सरकार तथा समाजसेवीलाई सेवा गर्न उत्साहित पारिनन् ।
राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रपति जिम्मेवार हुनुपर्छ । शितल निवासमा बस्ने, जनताले तिरेको कर दुरुपयोग गरेर बुलेटप्रुफ भवनमा आराम फर्माउनु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो कि होइन ? संसदबाट गएका विधेयकमा लालमोहर ठोक्नु, सरकारमा बस्नेले भेट्न चाहे भेट्नु, राजदूतहरुको ओहदाको प्रमाणपत्र बुझ्ने काम ठूलो काम होइन । सल्लाहकारहरुको भीड पालेर बस्ने राष्ट्रपति कार्यालयले बेला बेलामा देशै लज्जित हुनेगरी समवेदनाका ठाउामा शुभकामनासमेत पठाउने गरेको छ । अपराधीहरुलाई नेपाल तारा तक्मा दिएको छ । जेलमा कोचिएकालाई माफी दिएको छ । यस्तै नचाहिने नचाहिने काम गर्नका लागि राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको होइन । सीमा डुबेको छ, सीमा अतिक्रमण भएको छ, यी सबै घटनाक्रम के हो ? राष्ट्रपति स्थलगत निरीक्षण गर्न जानुपर्छ र सरकार तथा सेनालाई विशेष निर्देशन दिएको सुन्न देख्न पाउनुपर्छ । राष्ट्रपति राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुादा नै राष्ट्रिय गौरव बढ्छ, घातीहरु सचेत हुनेगर्छन् ।